संसारको सबैभन्दा सानो रुखको स्वभाव ठ्याक्कै मान्छेसँग मिल्छ.. - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । केवल १-६ सेन्टीमिटर उचाईको ड्वार्फ विलो( dwarf willow-सालिक्स हर्बेशिया) विश्वको सबैभन्दा सानो रूख हो । उत्तरी ध्रुव(अति चिसो) या अति गर्मी दुवै स्थानमा यो रुख बाच्न सक्दछ ।
यति सानो विरुवाले काठको चिसोबाट बच्न गरेको रणनीति त्यति सानो भने देखिदैन । यो विरुवा चिसो बतासबाट बच्न जमिनको नजिकै रहन्छ । जब ०.२ – २ सेन्टिमिटरको यसको पातहरूले अलिकति दुरी पर पुगेर प्रकाशका किरण भेट्टाउँछ तब यसमा हरितगगृह प्रभाव सन्चारित हुने गर्दछ ।
ड्वार्फ विलो परम्परागत रुखका ढाँचाभित्र अटाउँदैन । एकल डाँठको भरमा उभिने यस रुखको पार्श्व हाँगाहरू अरु अग्ला रुखलाई समातेर हुर्कने गर्दछ । यो पर्याप्त उचाईमा बढ्दैन, यसकारण पनि यसलाई कयौं व्यक्ति रुख मान्न अस्विकार गर्दछन् ।
वनस्पतिविज्ञहरूले यसलाई क्रिसमस रुख बनाउनको लागी उपयुक्त हुने ठहर गरेका छन् । क्रिसमस ट्री लाई सजाउन यसको भरपुर प्रयोग गर्न सकिने बगैंचाको खेती र व्यवस्थापन विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
मान्छेकै जस्तो स्वभाव
वर्तमान समयमा मानिसको संख्या ८ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । क्षमताभन्दा पाँच गुना बढी मानिसहरू गुन्द्रुक जसरी खाँदिएर बस्दा अहिले राजधानी काठमाडौंको अवस्था कस्तो छ त्यो बताईरहनु आवश्यक छैन । जसले स्वास्थ, सुरक्षा र आराममा निरन्तर प्रतिकुल असर देखाईरहेको छ ।
उसगरी विरुवाको पनि एउटा स्वभाव हुबहु हामी मानवसँग मिल्दोजुल्दो छ । ठ्याक्कै हामीजस्तै यो विरुवा पनि आवश्यक पोषण र मलजल भएको क्षेत्रमा गुन्द्रुक जसरी नै खाँदिएर हुर्कने गर्दछ ।
यती हुँदा पनि ड्वार्फ विलोको यस स्वभावको फाइदा भने जरुर छ । हामी मानिसकै वर्तमान स्वभाव जस्तै यो विरुवा पनि सानो ठाउँमा धेरै संख्यामा अट्न सक्दछ । यस रुखको लम्बाई र चौडाई ६*२ सेन्टिमिटरको हुने गर्दछ । यसकारण पनि तपाइँहरू यसलाई आफ्नो घर, कोठाको सानो भागमा हुर्काउन सक्नुहुनेछ ।
रङ्गीबिरङ्गी हुने गर्दछन् :
यसको भाले बोटहरूले पहेंलो फल उत्पादन गर्दछन् । जबकी पोथी बोटहरू रातो हुने गर्दछन् । यसर्थ पनि तपाईं आफ्नो रचनात्मक अभिव्यक्तीलाई व्यक्त आफ्नो इच्छाअनुसारको रङहरूको संयोजन गर्न सक्नुहुनेछ ।
उचाइको पनि चिन्ता छैन :
के तपाइँ उच्च पहाडी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ? समस्या छैन । ड्वार्फ विलो १,५०० मिटर भन्दा बढीको उचाईमा हुर्कन सक्छ। यो समुद्री सतहमा पनि भेटिनेगर्दछ, यसकारण कम उचाईमा बस्नेहरूको लागि पनि कुनै समस्या छैन । जुनसुकै उचाइमा बस्नेहरूले पनि सानो, सुन्दर यस रुखको आनन्द लिन सक्दछन् ।
के यो आधुनिक जीवनको लागि उत्तम क्रिसमस रूख हुन सक्छ ? यो प्रश्न वर्तमान अवस्थामा अनुत्तरित छ ? किन ? किनभने तपाइँहरूले भर्खर भर्खरै यस रुखको बारे थाहा पाउनुभएको छ । तपाइँहरूको प्रयोगले सो प्रश्नको उत्तर बताउनेछ । (बीबीसी)